Disclaimer: The anogutsikana akafukidza ichi muvhidhiyo / mhenyu rukova uri NOT inivhesitimendi zano. Handisi chipangamazano zvemari. Ava chete pachake pfungwa dzangu, pfungwa, machati, zvekushandisa ongororo (TA), kunzwisisa, nhau uye mutengo nezvakafanotaurwa. Nguva dzose ita pachako tsvakurudzo yako chete mari kungovimba kwakavakirwa ako vawana uye pachako mutongo. Kusarudza kushandisa uye / kana kutenga Bitcoin (BTC) kana mumwe mhando cryptocurrency zvikuru yakakwirira pangozi uye mumusika anogona ava chero nguva! Izvi Video / mhenyu rukova chinokuvadzwa varaidzo zvinangwa chete!
bitcoinbitcoin ongororoBTC bitcoinbitcoin cryptobitcoin crypto newsbitcoin cryptocurrencybitcoin musikabitcoin nhaubitcoin nhau nhasibitcoin hwokugadzira ongororobitcoin nhasiBTCbtc analysisbtc marketbtc nhaunhau dze btc nhasibtc technical analysisbtc nhasicryptocrypto btccrypto musikacrypto nhaucrypto news todaycrypto nhasicryptocurrencycryptocurrency musikacryptocurrency nhaucryptocurrency news todaycryptocurrency today
Gumiguru 30, 2018 pa 2:03 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 2:04 PM
Boom!!! Ngatitore crypto ichi!
Linda Le anoti:
Ian Bamber anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 2:22 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 2:33 PM
Tim Koerber anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 2:42 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 2:45 PM
Austin R anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 2:49 PM
Meg G anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 2:51 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 2:52 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 3:09 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 3:17 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 3:23 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 4:20 PM
Willie Sein anoti:
Defunct Sun anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 6:26 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 6:53 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 7:12 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 7:28 PM
Level Of Certainty anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 8:08 PM
Gumiguru 30, 2018 pa 8:24 PM
Joseph Bulla anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 10:09 PM
Crypto Bro anoti:
Gumiguru 30, 2018 pa 10:20 PM
John Ray anoti:
Gumiguru 31, 2018 pa 5:28 AM
Well said Kirby. Ndatenda.
Cellar Door anoti:
Gumiguru 31, 2018 pa 12:53 PM
Keithan Rollins anoti:
Gumiguru 31, 2018 pa 1:47 PM
Big boss anoti:
Mbudzi 2, 2018 pa 1:35 PM